Ungazisebenzisa njani izitikha ezintsha ze-WhatsApp okanye izitikha | I-Androidsis
Ungazisebenzisa njani izitikha ezintsha ze-WhatsApp okanye izitikha
UAron Rivas | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Tutorials, Whatsapp
Omnye umsebenzi omtsha ifikelele kwesona sicelo sithandwayo sokuthumela imiyalezo kubo bonke, kwaye asithethi enye into ngaphandle kwe-WhatsApp. Oku kufikelele kuphela kuhlobo lwe-beta, ke iya kufumaneka kuhlobo oluzinzileyo kungekudala.
Inqaku elitsha losetyenziso zizincamathelisi okanye izitikha. Njengee-emoticons, sinokongeza kwincoko ukuze siveze intetho yethu ngeendlela ezahlukeneyo kunye nezinomdla. Ke emva kokubonisa Ungawucaphula njani umyalezo ovela kumfowunelwa kuWhatsApp, sikubonisa ukuba uzisebenzisa njani kwi-WhatsApp Beta.
Ukuba ufuna kwaye uzame eli nqaku litsha phambi kwabaninzi, Kuya kufuneka ube ngumvavanyi we-beta wosetyenziso. Ukwenza oku, kuya kufuneka ungene esi sixhobo Khuphela uguqulelo lwetyala 2.18.329.
1 Baphi na kwaye bazisebenzisa njani izicelo ze-WhatsApp ezintsha
1.1 Sikufundisa: Uyenza njani inkqubo ye-WhatsApp yokuthumela imiyalezo ezenzekelayo. (Inyathelo ngenyathelo lesifundo sevidiyo)
Baphi na kwaye bazisebenzisa njani izicelo ze-WhatsApp ezintsha
Le nto intsha, eya kuthanda abaninzi, ngaphandle kwamathandabuzo, imi ecaleni kwe-emoji ye-app kunye nekhibhodi ye-GIF. Kweli candelo, njengaleyo sele isaziwa, kukho ikhathalogu yezi zinto, ukuze sizibonakalise ngendlela eyahlukileyo kunaleyo besisele siyazi kwi-app, nakwezinye iindlela ezininzi.
Siyakufundisa: Uyenza njani inkqubo ye-WhatsApp yokuthumela imiyalezo ezenzekelayo. (Inyathelo ngenyathelo lesifundo sevidiyo)
Ukuzisebenzisa, kuya kufuneka ngokucacileyo vula incoko kwisicelo kwaye ukhethe eyona ilungele incoko okanye leyo siyifunayo ngokulula. Njengakwii-emojis, zilungelelaniswe ngezincamathelisi zakutshanje nezisetyenzisiweyo, izitikha ozithandayo kunye neephakeji ezahlukeneyo ezikhutshelweyo kwifowuni, esinokuthi sizikhethe ngokunqakraza uphawu "+", ngendlela efanayo nendlela esenza ngayo kwiTelegram xa sifuna ukukhuphela ipakethe yezitikha kunye nolusu.
I-WhatsApp iguquka yonke imihla, nangona ezi ntlobo zeempawu zingasibekeli isibakala sokuba zifike emva kwexesha, kuba ezinye iiapps sele zidityanisiwe ngaphambili. Nangona kunjalo, kulungile ukuba bayazisebenzisa. Ngokufanayo, oku akukafumaneki kuhlobo olusemthethweni lwesicelo, kodwa kufanele ukuba kungekudala.
Kwelinye icala sikwachaza indlela yokudlulisa iincoko ukusuka kwifowuni enye ukuya kwenye, uyile njani iqela, indlela yokwenza amagama abe ngqindilili, akekeliswe ngomfanekiso, uqhankqalazo, indlela yokumakisha incoko njengoko ifundiwe y indlela yokuba ne-WhatsApp yasimahla ye-Android.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ungazisebenzisa njani izitikha ezintsha ze-WhatsApp okanye izitikha